Nadwo diini ah oo lagu soo gaba gabeeyay Masjidka Al-Rowda ee magaalada Boosaaso.[Masawiro]
Boosaaso:-Nadwadaan oo ahayd tii 16aad ee sanadwalba lagu qabto Masjidka Al-Rowda Bosaaso ayaa gashay habeenkii 6aad ahna habeenkii ugu danbeeyay waxaana inta aan la gaarin Xaflada Xiritaanka Nadwada Darsi Halku dhigiisu yahay.[Mas’uuliyada Xukumada ka saaran ka hortaga Musuq’maasuqa Iyo Ilaalinta Hantida Wadanka] soo Jeedshay Sh. Maxamuud Xaaji Yusuf oo ka mid ah Culimada Fara ku tiriskaa ee waxbadan ka qoray Soomaaliya iyo Heerarka uu gaaray Musuqu isla markaana wax badan ka jeedshay gooba kala duwan Talooyin ku saabsan siddii looga hortagi lahaa Musuq’masuqa.
Sheekha ayaa soo bandhigay heerarka ay Somali ka gashay liiska musuqmaasuqa aduunka in ay tahay meelaha ugu sareeya musuqa waxaana Sheekhu tilmaamay sababaha keenay in Soomaali ay noqoto meel ku caanbaxday musuq’maasuqa waxaa kow ka ah in aysan Soomali lahayn xeer ciqaabeed ku saabsan musuqa qofkii lagu helo iyo ciqaabta uu mudanayo taas markii la waayayna ay bulshadu gaartay in jaantaa rogan wax walba noqdaan.
Ugu danbayn sheekha ayaa soo jeedshay talooyin dhowr ah waxaana ka mid ahaa:-
(1) Ku dhaqanka Shareecada Islaamka Maadaama ay ugu horeesay cid walba oo ka hortagtay Musuqa.
(2) In lasameeyo hay’ad madaxbanaan oo ladagaalanka musuqa ah.
(3) In lasameeyo Xeer qeexaya Ciqaabta uu mudanayo Qofkii lagu helo musuq midyar iyo Midwayn,
(4) Qofka Mas’uuliyada loo dhiibayo oo loo doorto qof diin iyo Amaano leh.
Intaas ka dib waxaa lagalay hadaladii Xiritaanka Nadwada waxaana goobta ka hadlay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Culimada diinta Madaxda dhaqanka Mas’uuliyiin kasoctay Wasaarada Cadaaladda Iyo Arimaha Diinta Maamulka Mu’asasda Al-Minhaaj Gobolka Bari waxayna dhamaan mas’uliyiintii goobta kadashay soodhaweeyeen Nadwadaan iyo In ay kusoo beegantay Xili Baahi wayn loo qabay sidii loo helilahaa dad kasoobaxa Mas’uuliyada guud iyo gaar ahaanba.
Gabagabadii waxaa goobta laga akhriyay bayaan Culimadu ay ka soo saareen Nadwadii Mudada lixda habeen ah ka socotay Masjidka Al-Rowda Bosaaso bayaanka ayaa loo diray guud ahaan Umada Soomaaliyeed.
259,218 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress